Izindlela ezi-5 Zokumaketha Okuseduze Kuzothinta Ukuthengwa Kwabathengi | Martech Zone
Ubuchwepheshe be-iBeacon wumkhuba odlondlobala wakamuva ekumaketheni okususelwa kusondele. Ubuchwepheshe buxhumanisa amabhizinisi namakhasimende aseduze ngama-Bluetooth low-energy transmitters (ama-beacon), athumela amakhuphoni, ama-demos womkhiqizo, ukukhushulwa, amavidiyo noma imininingwane ngqo kudivayisi yabo ephathekayo.
I-iBeacon ubuchwepheshe bamuva obuvela kwa-Apple, nakulo nyaka kulo nyaka Ingqungquthela yomhlaba wonke yonjiniyelaUbuchwepheshe be-iBeacon bekuyisihloko esikhulu sokuxoxwa.
Njengoba i-Apple ifundisa izinkulungwane zabathuthukisi kabanzi ngobuchwepheshe, nezinkampani ezifana I-BeaconStream enikela ngohlelo lokusebenza lwamabhizinisi ukusebenzisa ubuchwepheshe namakhono okulufaka kuzinhlelo zokusebenza ezikhona, singalindela kuphela ukubona iBeacon ikhula ngokushesha nangobuciko.
Okwenzelwe abathengisi, Ama-iBeacons futhi ukumaketha okusondele nikela ngendlela entsha neqondile yokuxhumana namakhasimende, ukwandisa ulwazi lomkhiqizo nomthelela wokuziphatha kokuthenga kwabathengi.
Iqhubela abantu ku ukuthenga ngokushesha. Sezadlula izinsuku zokumaketha okuqondile kweposi kanye namakhodi we-QR. Ubuchwepheshe be-iBeacon bunikeza amabhizinisi indlela yokuxhumana ngqo namakhasimende angahle abe khona lapho maningi amathuba okuthi angathenga – uma eseduze noma esitolo. Amabhizinisi angathumela ukunikezwa ukuheha ukuthenga noma ukukhuthaza ukuthenga okungeziwe ngemiyalezo namakhuphoni.
Inika izinkampani a umugqa oqondile kumakhasimende. Ngokungafani nezinye izinhlobo zokumaketha, ukumaketha okususelwa ebangeni elisondelene kunikeza ama-brand indlela enobungani yokungenisa umyalezo wawo ezandleni zamakhasimende abo, empeleni. Ngenkathi uphawu lokuphromotha esitolo lungaphasiswa futhi lunganakwa, ukuthumela umlayezo ngqo kufoni yekhasimende kudala ukuzibandakanya okungcono. Futhi kuyindlela eyingqayizivele yokubonisa ubuntu bomkhiqizo nokwakha ubuhlobo obuqinile bomkhiqizo namakhasimende.
Amaphoyinti wokuthinta amaningi nekhasimende lakho. Indawo eyodwa ingaba namabhikhoni amaningi, ahlukile, ngalinye linikeza umlayezo ohlukile. Lokhu kunikeza ngamathuba amaningi okuxhumana nekhasimende futhi uwaqhube ukuze enze okuthile. Ngenkathi iphromoshini ethunyelwe ngqo endlini yekhasimende ingahle ingasetshenziswanga noma ibashayele ukuthi bathenge into eyodwa, ama-beacon avumela amabhizinisi ukuthi athumele amakhasimende izipesheli eziningi eziheha ukuthenga. Imakethe yamaBhekhoni endaweni yekhasimende, ithumela amaphromoshini amaningi ezintweni ezihambelana nezidingo zazo, konke ngesikhathi sangempela.
Ama-beacon anika amabhizinisi izibalo zabathengi ezihlukile. Lapho usebenzisa ubuchwepheshe ngohlelo lokusebenza olunjengeBeaconStream, amabhizinisi anakho ukufinyelela esikhathini sokuphila analytics kanye nokuqonda ngokuziphatha kwabathengi, ukuhamba ngezinyawo, izitayela nokuziphatha kokuthenga okungabasiza ukuthi bathuthukise kangcono amasu abo wokumaketha nokuthengisa. I- analytics kungasiza izinkampani ukuthi zinqume ukuthi yimaphi amaphromoshini nemikhankaso esetshenzisiwe futhi iwavumele azivumelanise ngokushesha kule mininingwane.
iBeacon nokumaketha okususelwe ebangeni elisondelene akuyona imfashini. Abamakethi sebevele bayawazi amandla wokumaketha kwamaselula, futhi ubuchwepheshe be-iBeacon buyisengezo esamukelekile isu lokuthengisa eliphelele. Izinhlobo eziphezulu ezifana neMacys, Starbucks neAmerican Airlines sezivele zitshale imali enkulu kuyo, futhi zibona amandla nezinzuzo zokumaketha okusondele. Ngabadlali abakhulu abacindezela ubuchwepheshe, maduze singalindela ukubona kunezelwa ezinye izici, njengezinkokhelo zeselula ezikhona, okwenza ukuthenga kube lula kakhulu kumakhasimende nokushayela ukuthengiswa okuningi kwamabhizinisi.
Nakhu ukuthi iBeaconStream isebenza kanjani
Tags: i-apula ibeaconbeaconlindokuhleukumaketha okusondele kwe-bluetoothibeaconukumaketha okusondele
UChris uyiChief Innovation Officer ye I-BeaconStream, isicelo sokumaketha esiseduze esisuselwa ebusosheni. IBeaconStream inika amabhizinisi azo zonke izinhlobo nosayizi indlela elula futhi engabizi kakhulu yokuxhuma kumakhasimende aseduze, ubathumele amakhuphoni, amademo womkhiqizo, ukukhushulwa, amavidiyo noma imininingwane, ngqo kudivayisi yabo ephathekayo.
Umkhombandlela Wekusasa Lokumaketha
Jul 14, 2014 ku-11: 17 AM
Okuthunyelwe okuhle Chris !! Imininingwane ewusizo ngempela .. Siyabonga ngokwabelana! ..
Jul 16, 2014 ku-5: 10 AM
Ngiyajabula ukuthi ukhombe lokhu! Akekho okhuluma ngalokhu. Angicabangi ukuthi kukhona umuntu ofunde izinkombandlela ezintsha. Ngokombono wami uxoxe ngamaphuzu amnandi mayelana nokumaketha okususelwe ekusetshenzisweni okuthunyelwe okumangalisayo kwabathengisi be-inthanethi. Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe okuhle.
Jan 15, 2015 ngo-9: 49 PM
Siyabonga ngokuthunyelwe okuhle uChris. Kamuva nje kube nokuxokozela okuningi maqondana nokuthi ukumaketha okusondele kakhulu kungaba kanjani elinye lamathuluzi asebenza kakhulu angasiza amabhizinisi ukuthi akhiqize i-ROI ephezulu kalula. Eqinisweni, ochwepheshe bezimboni banombono wokuthi ukuqhubeka phambili kungcono ukuthi amabhizinisi afanise uhlelo lwawo lokumaketha okusondele nezidingo kanye nezinto ezithandwa ngabathengi bawo. Kodwa-ke, njengoba abathengisi abaningi bengazi ukuthi bangahlanganisa kanjani amabhakoni necebo labo lokuhambahamba ezinye zalezi zivivinyo zebhekhoni ziye zaba yinto edumazayo. Sixoxe ngezimfihlo ezimbalwa zokuphumelela emkhankasweni wokumaketha ezizosiza abakhangisi ukuba benze umkhankaso wabo olandelayo lapha: http://blog.mobstac.com/2015/01/4-tips-to-kickstart-your-proximity-marketing-campaign/